यसo Walcott बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू यसo Walcott बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
LB एक फुटबल जीनियसको पूर्ण कहानी प्रस्तुत गर्दछ, जो उपनाम द्वारा प्रख्यात छ; "टाइगर"। हाम्रो यो वोल्टेट बालबालिकाको कथा र प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य तपाईले तपाईंको बचपनको समय सम्मको उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता सम्म पुग्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनीहरूको बारेमा धेरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू धेरै र बन्द र अन-पिच भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले उनको क्षमताको बारेमा जान्दछ तर केहि थोरै रोचक छ हाम्रो थ्यो वाल्टको जीवनी बुझ्छ। अब थप adieu बिना, सुरु गर्न दिन्छ।
थियो वालकट बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
थियो जेम्स वालकटको जन्म मार्च १ 16 March March को १an औं दिन स्टानमोर, युनाइटेड किंगडममा भएको थियो। जान्नको लागि चाखलाग्दो कुरा, थेओ एक सेता अ mother्ग्रेजी आमाबाट जन्मिएको थियो, लिन वालकोट र एक कालो ब्रिटिश जमैकन बुबा डोनाल्ड वालकोट। उसको बच्चा देखीएको छ आमा र बुबा दुवैबाट।
थिओ बर्कशायरको कम्पाटनमा हुर्किए। उनले इ England्गल्यान्डको प्राथमिक स्कूल र डाउन्स स्कूलको कम्पटन चर्चमा भाग लिए।
उहाँले एथलेटिकको रूपमा सुरु गर्नुभयो। थियो पछि पसेको, कुशल र निर्धारित बच्चा थियो भनेर चिनिन्थ्यो।
उसले भर्खरको अन्तर्वार्तामा भन्यो;“म एथलेटिक्समा लाग्थें। तपाईले राम्रा चीजहरुको उपयोग गर्न सक्नु हुन्छ र म छिटो छु। मैले मेरो सम्पूर्ण शक्ति एकपल्ट स्प्रिन्टि chan गरेर राखेको छु। "
एक बच्चाको रूपमा थियोको सुन्दरता सबैले प्रशंसा गरे। उनका आमाबुबा गर्व गर्थे कि बच्चाको रुपमा सुन्दर केटा छ। एथलेटिक्स Asides, Theo पनि pitcured तल कला र शिल्प मा राम्रो थियो।
युवा थियोओ वालकोट एक पटक कला र शिल्प मा आफ्नो कौशल प्रदर्शन।
उनको क्यारियर पथ उनको आमाबाबु र प्रियजनहरु संग राम्रो थियो। लगातार उनको पेस प्रदर्शन को लागि एक बोली मा, उनि सबै फुटबल को युवा Theo को लागि सर्वश्रेष्ठ विकल्प को रूप मा देख्यो।
समर नास बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
थियो वालकट बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -सारांशमा क्यारियर
थियो युवा क्लबको सट्टा स्थानीय ग्रामीण समुहको लागि फुटबल खेल्न थाले। उनको आमाबाबुले उनलाई कमजोर तुल्याउनुभएको थियो र स्थानीय स्तरबाट खेलमा उनको गति प्रयोग गर्न चाहन्थे।
यो एक पटक सम्झियो; सानो बच्चाको रूपमा मलाई फुटबलमा पनि रुचि थिएन। मेरा आमा बुबा र प्रियजनले मलाई मेरो गतिको कारणले यसमा प्रवेश गराउनुभयो। पहिलो पटक मैले खेलेको खेलमा म नौ बर्षको थिएँ र मैले पेनल्टीहरू बचत गर्नु उत्साहजनक हुनेछ भन्ने सोचमा स्वयंसेवा गरें। मैले पछि महसुस गरेँ कि म एक गोल कीपरको रूपमा मेरो गति प्रयोग गर्न सक्दिन। मैले अगाडि रूपान्तरण गर्ने बित्तिकै मेरो गति राम्रोसँग प्रयोग भयो "
उनको प्रदर्शनको कारण न्यूब्रिरी युवा फुटबल क्लबले उनलाई हासिल गरे। उनको गतिको लागि, यिंग थियो एकपटक न्यूबरीका लागि एक मात्र र सिजनमा 100 गोल भन्दा बढी रन बनाए। यो बेला बेला बेला सम्पूर्ण ब्रिटिसले उनलाई पहिचान गर्न थाले। थियो उस समय उनको टोलीमा सबैभन्दा सानो थियो।
न्युबरीमा युवा थेओ।
क्लबको लागि खेल्दै, जवान थियो द द डाउन्स स्कूल, कम्प्टनमा भाग लिनुभयो। यो न्यूब्रिरी, इङ्गल्याण्डमा एक व्यापक विद्यालय हो।
थेओले एक पटक स्कूलमा एक क्षण सम्झना गर्‍यो… ”जब म १० बर्षको भएँ, मेरो शिक्षकले हामीलाई भविष्यको कल्पना गर्न लगाए। मैले बाँकी जीवनको टाइमलाइन बनाएँ। मैले भर्खरै न्युबरीमा फुटबल खेल्न सुरु गरेको थिएँ, त्यसैले मैले मेरो पेशेवर फुटबलरको रूपमा चित्रहरू लिएँ। मैले कल्पना गरें कि म एउटा राम्रो कार ड्राइभ गर्नेछु, राम्रो घर पाँउछु, र इ England्ल्यान्डको साथ विश्व कप जित्छु। मैले कल्पना पनि गरेकी छु मेरा दुई श्रीमतीहरू हुनेछन् - एक मर्नेछे र फेरि विवाह गर्नेछु (मैले मेरी प्रेमिका मेललाई यसबारे गोप्य राखेको छैन।) - र म and ० वर्षको उमेरमा मर्नेछु। सबै धेरै टाढा ल्याइएको थियो, तर फुटबलर भाग साँचो आएको छ।
यसो न्यूबरीका लागि राम्रो फुटबलर बन्न पुग्यो। उनको पिसा प्रदर्शनले स्विइन्डन टाउनको लागि एक कदम उठायो जहाँ उनले आफ्नो संख्या9को बिरुद्ध ठूलो र कठिन प्रतिद्वंद्वीको रुपमा खेले।
उनले साउथेम्प्टन जानु अघि त्यहाँ छ महिना मात्र बिताए तर उनले चेल्सी एफसीमा भाग लिने मौकालाई अस्वीकार गरे पछि त्यसबेला उनले पैसालाई खेलाउन सुरु गरे। को मनपर्‍यो Arjen Robben, Didier Drogba र फ्रैंक लम्पर्ड पहिले नै उपस्थित थिए।
जैक विलियर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
२००–-०2004 सिजनमा, वालकोटले साउथम्प्टन युवा टोलीमा अभिनय गरे जुन एफिसिच टाउन बिरूद्ध एफए युथ कपको फाइनलमा पुगेको थियो। यसका साथै, उनी साउथ्याम्प्टन रिजर्भ टोलीमा १ to बर्ष १05 days दिनमा खेल्ने सबैभन्दा कान्छो व्यक्ति भए।
वालकोट २० लाख २०० on मा आर्सेनलमा ट्रान्सफर गरियो, million मिलियन डलरको लागि। बाँकी उनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
ग्रेटिट Xhaka बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य
थियो वालकट बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
थियो वालकोटका अभिभावक मध्यम वर्ग पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट जमैकाबाट आएका हुन्। Raheem Sterling समान रूटबाट पनि छ।
उनका बुबा, डोनाल्डले लिनेसँग ब्रिटेन आएको केही महिना पछि विवाह गर्नुभयो। बेलायती नागरिकसँग बिहे गरेपछि उनी यो देशमा स्थायी बसोबास गरे।
ग्लोफी सिर्जर्डन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
भर्खरै, डोनाल्ड र लिने अज्ञात कारणहरूको लागि छुट्टिए। तिनीहरूको छुट्टिए पछि, वालकोटको बुबाले गेललाई डेट गर्न शुरू गरे। एक छोटो सम्बन्ध कवच पछि उनले उनीसँग विवाह गरे।
वालकटले आफ्नो बुबाको विवाहको दिनमा भने ...'कस्तो अचम्मको दिन !!! मेरो हजुरबुवालाई बधाई छ # हसबन्ड र # पत्नी बन्नेमा। तपाईंले तलको चित्रमा बुबाको बुबासँग समानता देख्न सक्नुहुनेछ।
थियोले आफ्ना बुवाको विवाहको दिन मनाउँदछन्।
मातृभाषा: Lynne Walcott ले सधैं उनको छोरो आफ्नो जवान देखि आफ्नो आँखा को रूप मा देखेको छ। दुवै मिति सम्म धेरै नजिक छन्।
डेभिड Moyes बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
थियो वालकोट र मदर- लिन वालकोट।
डब्लुओ वालकोटकी आमा, लिने वालकोटले आफ्नो छोरालाई माया गर्थे, जसले महिला युवा फुटबल कोचको रूपमा क्यारियरको रूपमा काम गर्छिन्। तल उसको र उनको टोलीको तस्वीर छ।
लिन वालकोट क्यारियर पथ- युवा कोच।
सिस्टर: उनकी जेठी बहिनी होली, एक बिल्डरबिल्डर हो जुन जुलाई 2010 मा ब्रिटिश प्राकृतिक शरीर निर्माण संघ केन्द्रीय च्याम्पियनशिपमा दोस्रो थियो।
थियो वालकोटको बहिनी- होली वालकोट।
भाइरस: थियो वालकोटको भाई एशले वालकोट आफ्नो कान्छो भाई जत्तिकै सुन्दर छ। हुर्केका, एशले वालेकट फुटबलको लागि कहिले पनि कटआउट थिएनन्। उनले आफ्नो शिक्षालाई अगाडि बढाए।
एस्ली र उनको बुबाले एक पटक नै न्युयोर्क आक्रमणमा आक्रमण गरेको कारणले देशमा वाल्कोट खेल्ने खेलमा निर्णय गर्न सकेनन्। तिनका शब्दहरूमा "केहि जोखिम उठाउन लायक छैन"
दुवै थियो, डोनाल्ड र एशले धेरै नजिकका साथीहरू छन्। थियो उनको भाइ एशले को तुलनामा गहिरो छ जुन सबै भन्दा राम्रो छ।
थियो, डोनाल्ड र एशले वालकोट।
थियो वालकट बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
यदि एक जवान केटाले आफ्नो शरीरको सट्टामा महिलाको आत्मालाई प्रेम गर्दछ भने उसले केवल एउटी महिलालाई माया गर्छ। यो थियो थियो वाल्कट प्रेम कहानी। थियो आफ्नो बाल्यावस्थाको प्यारी, मेलानिया स्लेडसँग दीर्घकालीन सम्बन्धमा रहेको छ जुन पेशेबाट फिजियोथेरापिस्ट हो।
उनी अत्यन्तै सुन्दर र मीठा छिनकी थिइन् उनी त्यसोभए केटाकेटी (अहिले पति) जो धेरै सुन्दर छ।
थियो वालकोट र मेलानी स्लेड- प्रेमको शुरुआती दिनहरू।
उनीहरूको सम्बन्ध २०० 2004 मा साउथेम्प्टनमा वेस्टक्वे शपिंग सेन्टरमा भएको बैठक पछि शुरू भयो।
थियो र मेलानी …… दिन उनीहरू भेटे।
जुन, २०१ On मा दम्पतीले टस्केनी, इटालीको इटालियन महल कास्टेलो डि भिन्सिग्लिआटामा विवाह गरे।
थियो वालकोटको विवाहको फोटो।
थियोको विवाहले यसको फलको साथ तुरून्त आशिष्‌ दियो। तिनीहरूको जेठो छोरा फिनले जेम्स वालकोट १० अप्रिल २०१ on मा जन्म भएको थियो। तलको फोटोले थियो, मेल र फाइनली देखाउँदछ। मेल आफ्नो दोस्रो बच्चाको साथ गर्भवती भइसकेको थियो।
थियो वाल्टोटले एक पटक आफूलाई लेबल गर्यो 'संसारमा सबैभन्दा खुसी व्यक्ति' एक सिलाई पछि 'सहि सप्ताहांत' आफ्नो दोस्रो बच्चाको जन्मको लागि रातभर बस्दै घन्टा बिताएर।
वाल्कोटले बर्नमाउथको विरुद्ध आर्सेसनको निर्णायक दोस्रो चरणमा आर्सेन वेन्जरको बराबरीमा राखेका थिए 'तंत्रिका' तर नींदको कमीको बावजूद निम्नलिखित 12 काम माईला स्लेड संग श्रम को घन्टा जो कि दिन को शुरुआती घडी मा शुरू भयो।
अगाडी एक चट्टान इशारा संग मनाया गयो, उनको लक्ष्य आफ्नो नया केटा एलो, जो नोभेम्बर 26 को 2016th मा जन्म भएको थियो को लक्ष्य को समर्पित।
थियो वालकट बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -फिनली, उनको पहिलो छोरो संग भयानक क्षण।
जब मिस्सी वाल्कोट, आर्सेल्यान्ड र इङ्गल्याण्ड फुटबलर थियोले आफ्नी छोरा फिनलेलाई अप्रिल 2014 मा जन्म दिए, डाक्टरहरूले पुष्टि गरे कि उनीहरूको जन्मजात हृदयको दोष थियो।
१० हप्ता पुरानो फिन्लीमा शल्यक्रिया गर्नुपर्‍यो। मेलानिया वालकोटको शब्दहरूमा,
“फिनले गर्भवती भएको बेला थिओ र मलाई केही पनि गलत लागेको थिएन। ऊ दुई हप्ता चाँडै आइपुग्यो र मेरो स्वाभाविक जन्म भयो, तर अचानक डाक्टरहरूले भने कि उनको मुटुको गनगन भयो, जुन हामीलाई भनिएको थियो एकदम सामान्य थियो। २ hours घण्टा पछि यो निको पार्नु पर्छ, तर यो अझै त्यहाँ थियो। डाक्टरहरूले भने कि उनीहरूले यो के हो थाहा हुँदैन जब सम्म उनीहरूले ईसीजी र मुटुको अल्ट्रासाउन्ड गर्छन्।
सौभाग्य देखि, हामी उनको साथ रहन सक्छ किनकी म उनको नजर देखि बाहिर नहीं चाहता था, र हामी Watford अस्पताल मा पांच दिन को लागि समाप्त भयो किनकी उनि हामिलाई घर जाने जाने देखि पहिले के गरिरहेको थियो स्थापित गर्न चाहते हो। उनीहरूले आफ्नो अवस्था परिवर्तन भएन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न परीक्षण गरिरहन्थे, तर सौभाग्य देखि केहि पनि महत्त्वपूर्ण थिएन।
उनले जारी राखे ...
डाक्टरहरूले पत्ता लगाए कि फिन्लीलाई पल्मोनरी भल्भ स्टेनोसिस थियो, जो जन्मजात हृदय दोष हो। यसको मतलब हृदयको दायाँपट्टि भएको भल्भले फोक्सोमा रगत पम्प गर्दछ कि राम्रोसँग खुल्दैन - यसले मुटुको दाहिने छेउ ठूलो पार्दछ किनकि यसले फोक्सो वरिपरि रगत लिन कडा परिश्रम गर्नुपर्दछ। थेओ र म डराए, यद्यपि मेरो फिजियो पृष्ठभूमिले मद्दत गर्यो - मलाई थाहा छ मुटुले कसरी काम गर्दछ। ऊ पनि राम्रो देखिन्थ्यो, त्यसैले उसलाई हेर्दै तपाईले चिन्नुहुन्न - जसले हामीलाई सकारात्मक महसुस गरायो। ऊ राम्रो हातमा थियो।
हामी घर गए र लन्डनका रयल ब्रोमप्टन अस्पतालमा विशेषज्ञलाई उल्लेख गरिएको थियो। हामीले सल्लाहकार चाँडै देख्यौं। जब तिनी शल्यक्रियामा गए, त्यो सबभन्दा बढी घडी थियो।
फिनले शल्यक्रिया पछि तुलनात्मक रूपमा चाँडै आए र हामीले उसलाई तुरून्त देख्यौं। ऊ एकदमै चिन्तित बच्चा थियो किनभने उसलाई थाहा थिएन कि के हुँदैछ। उहाँ रातभरि सबै क्याथेटरहरूसँग बस्नुभयो र हामी अर्को दिन उसलाई घरमा लग्यौं। फिनाले अहिले ठीकै छ, र उसले १'s वर्ष नपुग्दासम्म नियमित चेकअप गर्नेछ, आशा छ त्यो त्यस्तै छ। ”
थियो र मेल, फिनलेको स्वास्थ्यको लागि कृतज्ञ छन्
थियो वालकट बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -घर एक पटक आक्रमण गरेर Burglars
चोरियन्स लिग म्याच एफसी बार्सिलोनासँग खेल्दा बर्गलर्सले एक पटक थियोओ वालकोटको हवेलीमा छापा मारे। यो मार्च 8, २०११ को आठौंमा भयो। तिनीहरूले सम्पत्तिहरू चोरी गरे जुन £ £०००० भन्दा बढी छ।
बर्गलरहरू, रायन (बाँया) र केल्भिन (दायाँ) एक पटक थियो थियो वाल्कटबाट चोरी।
एक रूढिवादी विन्डो मार्फत पाउन्ड2लाख घरमा तोड्न पछि क्रोकहरूले स्वयंलाई सम्पत्तिमा एक वीडब्लू गोल्ड कार सहित पार्कमा पार्क गरेको थियो।
उनले भने कि त्यस रात घरमा भएको क्षतिले परिवारलाई ठूलो चोट पुर्‍याएको छ र उनीहरूले आफ्नो घर उल्लंघन भएको महसुस गरे।
दुबै चोरहरू, रायन ली र केभिन काठलाई तीन बर्ष र नौ महिना जेलमा राखिएको छ।
थेओ वालकोटका बाबुआमा र भाई, जो घरमा पनि बस्छन्, क्लबको एमिरेट्स स्टेडियममा उनको स्वागत गर्दै थिए, जब छापा मारियो।
थियो वालकट बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -विश्वमा सबैभन्दा सुन्दर फुटबलर
थियो एकमात्र फुटबलर हो जसको सुन्दर अनुहार कुनै महिलाले मन पराउँछन् र उनको लागि बिगार्न सक्छ।
पक्षपात नगरी, थियोओ वालकोट धेरै फुटबल पंडितहरूले विश्वको सबैभन्दा सुन्दर फुटबलरको रूपमा लिन्छन्।
उसको मनमोहक दृश्यले धेरै केटीहरूलाई दोस्रो झलक नलिनसम्म पछ्याउँदछ। सबै उनको राम्रो अनुहार र राम्रो ट्याटू शरीर को लागी धन्यवाद।
थियो वालकट बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -हैरी पोटर जडान
उनको परिवारले २००c को फिल्म ह्यारी पॉटर एन्ड अर्डर अफ द फिनिक्समा क्यामिन देखा पर्‍यो, वाल्कोट काकीको साथी डेभिड याट्स द्वारा निर्देशित। वाल्कोट आफैं पनि देखा पर्न थालेको थियो, तर आर्सेल्यान्डको उनको प्रतिबद्धताले उनलाई बिस्तारै बलियो बनायो।
थियो वालकट बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -किताबहरूको लेखक
वालकट लेख्ने समयमा चार प्रकाशित पुस्तकहरू छन् - "TJ र ह्याट-ट्रिक", "TJ र दण्ड.
पहिलो दुई अप्रिल २०१० मा प्रकाशित भयो, पछिल्लो दुई अगस्त २०१० मा प्रकाशित भयो। सबै चारै कोर्गी चिल्ड्रेन्स द्वारा प्रकाशित गरिएको थियो।
अगस्त २०११ मा, वालकोटको स्वत:-जीवनी थियो थियो: ग्रोइंग अप फास्ट बान्टम प्रेस द्वारा प्रकाशित गरिएको थियो। पुस्तकले इंग्ल्यान्डका प्रबन्धक फेबियो क्याप्लोलोको आलोचनाको कारण विवाद भएको थियो, जसलाई उनले वर्णन गरे "चिसो र क्लिनिकल"।
थियो वालकट बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -शक्ति र कमजोरी
उनको शब्दहरुमा ..."मेरो स्पर्श, जागरूकता र गति। स्कूलमा मैले १०० र २०० मिटरमा सफा गरें र म जानु अघि मैले ११..100 सेकेन्डको समयले १०० मिटर रेकर्ड तोडें। बर्कशायर स्कूलहरूको लागि, म मेरो उमेरको लागि शीर्ष दुई मा स्थानमा थिए तर यो मेरो लागि सधैं फुटबल हुने थियो। ”
उनको शब्दहरुमा ...“मेरो बाँया खुट्टा। कुनै पनि खुट्टा प्रयोग गर्न सक्षम हुन यो स्तरमा यो धेरै फाइदाजनक छ, त्यसैले यो केहि गर्दैछु जुन म काम गर्दैछु। म मेरो हेडिंगको साथ धेरै राम्रो गर्न सक्थें। ”
Everton फुटबल डायरी
मैथ्यू रायन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू